2019 Ntuziaka kachasị ọhụrụ na Ipamorelin: Kedụ Ka Anyị Pụrụ Isi Jiri Ipamorelin?
2019 Ntuzi kachasị ọhụrụ na Ipamorelin: Olee otu anyị nwere ike isi jiri Ipamorelin?
Ihe niile banyere Ipamorelin
1. Kedu ihe bụ Ipamorelin?
2. Ipamorelin maka anyị?
3. Top Uru Uru Ipamorelin
4. Kedu ka esi eji Ipamorelin mee?
5. Ipamorelin Nyocha akwukwo: Adịghị m ka onye ọzọ
6. Ihe Omume puru ime nke Ipamorelin
7. Atụmatụ maka ịzụ ihe iphone
Ipamorelin (170851-70-4) bụ ọgwụ nke na - akpali ahụ gị iji mepụta hormones ndị na - eto eto ma nyere gị aka imezu ihe mgbaru ọsọ gị. A na - emepụta homonụ nke na - eto eto (GH) na glands pituitary nke nwere ike ida ma ọ bụ mepụta hormones na obere ọnụ. Ipamorelin na - akpali mmepụta nke homonụ n'uba n'ụzọ abụọ. Nke mbụ, ọgwụ ahụ na - eme ka mmiri GH na - ahapụkwa hormone nke na - eduga n'ọtụtụ dị elu nke nchịkọta hormone.
Nke abụọ, Ipamorelin na-egbochi hormone somatostatin nke na-egbochi mmepụta nke homonụ hoba n'ime ahụ gị. Ewezuga ịdọrọ ihe omume somatostatin n'ime ahụ gị, ọgwụ a na-ewepu ihe mgbochi gbochie mmepụta nke mmepe nke hormone na-eto eto ka ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ homone na-etowanye.
N'adịghị ka GHRP-2 na GHRP-6, Ipamorelin anaghị emetụta ọkwa ghrelin na usoro ahụ gị. Nke ahụ pụtara na ị gaghị enwe mmụba ọ bụla na agụụ gị nke bụ ihe dị mma karịsịa maka ndị na-eji ngwaahịa ahụ enyere ha aka ịhapụ abụba anụ ahụ ma jigide ahụ ha. Ọzọkwa, ndị na-ewere Ipamorelin dị ka ngwaahịa na-egbochi ịka nká ọ na-enyere ha aka ịnọgide na-adị mma ma yie nwata. Eziokwu ahụ bụ na ọgwụ a, na-akpali ahụ gị iji mepụta homonụ uto, ọ pụtara na enweghị mmechi nke mmepụta GH dị ka ọ dị na nchịkwa HGH sịntetik.
Ipamorelin na - ebute mmepụta nke homonụ n'uba n'ụzọ yiri ụdị mmepụta ihe na - eme ka emepụta hormone a dị mkpa. Ọzọkwa, usoro ahụ pụtara na ọgwụ na-ekpuchi gị obere mmetụta dị oke ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-akpali akpali. Ipamorelin na - emepụta ihe dị ezigbo mma maka mmepụta nke GH ruo ogologo oge nke na - ebuli elu GH maka ihe dịka 3 awa mgbe ị na - ewere ọgwụ gị.
Ịba ụba nke homonụ gị na-eto eto dị ka ezi echiche, ma eleghị anya nke ahụ bụ ihe ị na-atụ anya inweta. Otú ọ dị, eziokwu ahụ ka nọgidere na-eji ihe mgbakwunye naanị na-emepụta ahụ gị iji mepụtawanye HGH iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị. Egwuregwu Ipamorelin na nri kwesịrị ekwesị na mgbatị ga-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere gị aka imezu ihe mgbaru ọsọ gị.
Mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ a eme ihe, ị ga-aghọta na ahụ mmadụ dị iche iche ma atụla anya na ọ ga-esi na ya pụta dị ka nke enyi gị nwetara mgbe ọ na-eji Ipamorelin. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ mgbe nile nwere ike ịnweta mmetụta dị mma karịa ndị buru oke ibu ndị na-adịghị ọbụna na-egbochi ịga nnọkọ ntụrụndụ. Nke ahụ pụtara ụfọdụ ihe ga-ekpebi ụdị nsonaazụ ị ga - enweta mgbe ị na - eji Ipamorelin dịka ahụ gị, ọnọdụ ahụike n'etiti ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime nsonaazụ ndị ị na-atụ anya na iji ọgwụ a gụnyere ịkwalite ahụ ike ahụ gị, ịnweta uru ahụ ọkụ ma na-ere abụba anụ ahụ.
N'ikwu okwu, Ipamorelin (170851-70-4) anaghị ere maka oriri ndị mmadụ kama nchọpụta ahụike. Otú ọ dị, mgbe nchọpụta chọpụtara na ọgwụ ahụ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na eji ya na ụmụ mmadụ, ndị mmadụ malitere iji ya, ọtụtụ ndị na-enwekwa uru ugbu a. Iwu na-adịkarị iche site n'otu gọọmenti gaa na onye ọzọ, anyị na-agbakwa gị ume ikwenye iwu obodo gị na ọgwụ a. Ma dọkịta gị nwere ike inyere gị aka ịzụta ọgwụ ma ọ bụ, ị nwekwara ike ịchọta ya na ntanetị dị iche iche n'ịntanetị. N'agbanyeghi na ị nwere ike ịnweta ọgwụ ahụ, jide n'aka na dọkịta gị ga - eduzi gị na usoro dum iji zere mmegide nke mmetụta mmetụta ọjọọ.Eziokwu ị kwesịrị ịma tupu iji MK-2866 (Ostarine)
Enwere ike iji ọgwụ a eme egwuregwu, ndị na - eme egwuregwu, na onye ọ bụla ọzọ nwere obere ogo nke uto. Ọrụ Ipamorelin bụ isi bụ ịkwalite mmepụta nke homonụ uto na ahụ. Mkpụrụ hormone nke na - eto eto na - emetụta ahụ niile, nke ahụ pụtara na akụkụ niile nke ahụ na anụ ahụ ga - emecha too too uto. Ndị ọkà mmụta sayensị ekwuola na ọgwụ ahụ nwere ike inyere ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu ahụ aka ịzụlite akwara dị mma. N'ihi ike ọgwụ nwere ike ịmetụta uto na anụ ahụ niile, ụfọdụ ndị na-eji ọgwụ ahụ eme ihe dị ka mgbakwunye ịka nká.
N'aka nke ọzọ, ọnụnọ hormone nke na-eto eto na ahụ na-eme ka anụ ahụ metabolism nke na-enyere ndị na-eme egwuregwu na bodybuilders aka ịgbaba abụba ndị ahụ. Mgbe ị na-egbutu ma ọ bụ na-etinye aka na mmiri, ọgwụ ahụ ga-enyere ndị egwuregwu aka n'oge mgbake ahụ ebe ọ na-enye ohere ka anụ ahụ rụzie onwe ha. Mmiri ndị na-eto eto na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'uto nke anụ ahụ na-eme Ipamorelin maka ozu ahụ choro ibili.
3. Top 10 Ipamorelin uru
Ruo ugbu a, Ipamorelin na-apụta dị ka onye kachasị ukwuu na peptide ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ. A na-ewere ọgwụ ahụ dị n'etiti ndị GHRP kasị dịrị nchebe ma bụrụ onye GH Stimulator họrọ. Ndị ọrụ nke ọgwụ a ekwuola uru dị iche iche nke anyị ga-ekwu n'okpuru ebe a. Ipamorelin kemgbe ọganihu ya nọgidere na-ewu ewu n'ihi mmetụta ọ na-enye n'ime ahụ. N'ezie, n'etiti ndị niile ndị na-ere ọkụ peptides, ọgwụ a ka bụ ọkacha mmasị maka ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ na ndị na-eme egwuregwu na ndị ọrụ ndị ọzọ na-eji ya dị ka ihe na-eme agadi. Nke a bụ ụfọdụ uru nke Ipamorelin nkịtị;
Ọ na - enyere aka ịba abụba abụba - mmụba na homonụ uto na ahụ na - ebutewanye metabolism nke na - enyere aka na abụba abụba. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ ga-adị irè ebe a ma ọ bụrụ na mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị na nri kwesịrị ekwesị na-eso ya. Dịka ọmụmaatụ, maka ndị na-eme egwuregwu ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu na-arụsi ọrụ ike, ha ga-enweta nsonaazụ ọma ma e jiri ya tụnyere ndị ọrụ ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ. Yabụ, obere ọrụ ma ọ bụ ọzụzụ ga-abụ nnukwu mgbakwunye na usoro onunu gị iji nwee uru Ipamorelin.
Ịbawanye ụba nke uru ahụ - ọ bụ ezie na ọgwụ a abụghị nke anabolic steroid, ọ gosipụtara na ọ dị irè inyere ndị na-eme egwuregwu aka na ndị ọzọ na-ahụ maka ịmalite ahụ ike dị oké mkpa. Mmiri homonụ na-eto eto bụ ndị bụ isi na-enye aka na mmepe nke anụ ahụ n'ime ahụ, nke ahụ na-agụnye uru ahụ. Na mgbatị kwesịrị ekwesị, akwara na-agbatị, na uto homonụ na-enye aka n'ịrụzi ha.
N'ikpeazụ, onye ọrụ ahụ ga-enweta obere ihe mgbu ka ahụ na-eto eto. N'ikpochasị abụba ndị ahụ na-emepụta ihe ga-enye ohere maka mmepe nke uru ahụ. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-elekwasị anya n'inweta ụbụrụ ahụ ma na-enweta ọdịdị ahụ kwesịrị ekwesị. Otutu n'ime ndi ogwurugwu Ipamorelin ndi otutu ndi n'egwuregwu na ekwu na mmuta ha na-eto eto a.
Mmetụta mkpali na - enweghị mmasi - n'adịghị ka GHRP-6 nke a maara maka ịba ụba agụụ, Ipamorelin enwechaghị mmetụta ọ bụla na-akpali agụụ. Ọtụtụ ndị ọrụ GHRP-6 nọ na-eme mkpesa maka agụụ siri ike nke na-eme ka ọ siere ha ike ileghara ibu ha anya ma ọ bụ na-esure anụ ahụ. Otú ọ dị, mmepe nke Ipamorelin na-egosi ugbu a na ọ bụ ngọzi ebe ọ bụ na ndị ọrụ anaghị echegbu onwe ha ọzọ. Nje ọgwụ anaghị eme ka agụụ gụkwuo gị, nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye dị mma n'ibilata usoro ntụrụndụ.
Ezigbo ụra - ihe ka ọtụtụ ná ndị ọrụ Ipamorelin ekwuola na ị ga-ebute ụra na ụra miri emi mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Maka onye na-ehi ụra nke nwere oge siri ike ihi ụra n'ihi ụra nke ụra nke ọtụtụ n'ime steroid ha ji eme ihe, ha nwere ike ịchọta ebe mgbaba na Ipamorelin. Ọgwụ ahụ na-agbatị ahụ gị ngwa ngwa karịa mgbe ị na-abịa site na mgbatị na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịrahụ ụra n'ime oge kachasị oke. N'aka nke ọzọ, ọgwụ ahụ pụkwara ịbụ ọgwụ dị mma maka ndị ọrịa na-adịghị ehi ụra. Otú ọ dị, ọ dị mma ka ị gwa dọkịta gị mgbe niile tupu ịṅụ ọgwụ a.
Nọgide na-ele ndị na - eto eto anya - Ipamorelin maara dị ka otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ike ịka nká, ọtụtụ ndị na - ahọrọ ya n'ọchịchọ ha ka ha nọgide na - eto eto. Mmiri homonụ na-eto eto nwere mmetụta dị ukwuu na nlọghachi nke akpụkpọ ahụ. Ọgwụ a na-enye aka n'iwepụ wrinkles na akpụkpọ ahụ gị ma nyere ndị ọrụ aka inweta akpụkpọ anụ na-eto eto. Mmiri homonụ nke na-eto eto na-eme ka mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ ahụ na anụ ahụ na-ekpochapụ akpụkpọ ahụ niile. Ọ na-enye aka na-agwọ ọrịa nke akpụkpọ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla na-akpata nhụjuanya. Ọgwụ na-enyekwara ndị inyom aka ịzụlite aka na ntutu isi ike, si otú a mee ka mma ha dịkwuo mma.
Na - emeputa mmegha ahụ - Ipamorelin egosila na ọ bụ nnukwu mgbakwunye na - enyere ọtụtụ ndị ọrụ aka inweta ezigbo anụ na ọbụnadị ọdịdị. Imirikiti ndị na-a drugụ ọgwụ ọjọọ ekwuola na ha enwetala akpụkpọ ahụ na-eto eto mgbe ha gwọchara ọgwụ Ipamorelin ruo ihe dị ka ọnwa isii. Otú ọ dị, a na-ahụ nsonaazụ ndị a naanị maka ndị ọrụ nwere ụkọ hormone. Ọzọkwa, ọgwụ ahụ na-enyekwara ndị ọrụ aka itolite ike, ntutu siri ike ma sie ike.
Na - eme ka ihe onwunwe ịnweta ọkpụkpụ - na - enweghi ike iji nwetaghachi ihe ọ bụla, Ipamorelin na - eme ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ na nkwado zuru ezu kwalite, na - eme ka onye ọrụ ahụ kwụsie ike. Ipamorelin na-emekwa ka ahụ ike dịkwuo mma dị ka nke ọma yana ịkwalite usoro mgbochi gị. Nje ọgwụ na-eje ozi dịka ihe ngwọta maka akụkụ nile nke ike ike na ahụ gị.
Na-achịkwa ọbara mgbali-na ọtụtụ ndị nwere ogo hormone na-ahụ n'ahụ ha, na-enweta ọbara mgbali elu na nke jupụtara na ndị agadi. Ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọbara na-ekere òkè dị mkpa n'ịchịkwa nsogbu ahụ na ịchekwa ọrịa ndị ọzọ na-arịa ọrịa obi gị. Ọgwụ ọjọọ nke na-akpali mmepụta nke homonụ mmadụ na-eme ka obi gị na arịa ọbara gị dị mma.
Ịmepụta insulin mmepụta - enweghị insulin na ahụ na-ebute ọrịa shuga, nke ahụ bụ nsogbu ọtụtụ ndị na-eto eto na-eto eto hormone ahụmahụ. Usoro ọgwụgwọ ọbara na-enye aka n'ime ka homonụ ụmụ mmadụ na-eto eto na ọkwa dị mkpa, si otú ahụ na-akwalite mmepụta nke insulin dị ka mma na ịkwalite ogo anụ ahụ. Ndị ọrịa shuga na-agwọ ọrịa ọgwụgwọ Ipamorelin, na-akọ ezigbo mmelite n'ime oge.
Ngwọta iji ibu oke ibu - oke ibu bu nke a na-ekwu na ọ dị ala na-eto eto homonụ na ahụ. Ya mere, inweta Ipamorelin ga - enyere gị aka imezi omume anabolic ahụ na metabolism. N'ikpeazụ, ihe ndị a na-eme ka ọ ghara ịdị arọ, ma mee ka ị nweta ahụ ike na ịdị arọ. Ihe dị mma na Ipamorelin bụ na ọ dịghị akpali agụụ na ị gaghị etinye ihe ọ bụla ọzọ dị arọ ka ị na-eji ọgwụ a eme ihe.
A na-enweta Ipamorelin na mpempe akwụkwọ na-enweghị ntụpọ, ma a ghaghị ịmeghachi ya na mmiri bacteria ma ọ bụrụ na ịmalite iji ya. Mgbe usoro a gasịrị, a ghaghị itinye ọgwụ ahụ n'ime ngwa nju oyi iji ghere ya. A ghaghị ịkwadebe ọgwụ ahụ n'ụzọ zuru oke tupu nchịkwa ya site na nrugharị ma ọ bụ site na ụzọ ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ intramuscularly.
Ọtụtụ ndị na-achọta SubQ dị ka ọkacha mmasị ha n'ihi na a na-etinye 2 na 3 ugboro ugboro n'ụbọchị. Na-eji obere sirinji insulin na-emezi ọgwụ a. N'ọnọdụ, ị maghị otú ị ga-esi gbanye onwe gị, hụ na ị ga-aga maka ọkachamara n'ịgwọ ahụike iji megharịa ahụ. Mgbe ụfọdụ, ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-abaghị uru nwere ike ibute nsogbu ahụike nke nwere ike igbochi ọganihu gị. Dọkịta gị nwere ike ịzụ gị ka ị ga - esi mee ya; mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga - eji nlezianya na - enye ọgwụgwọ ahụ.
(1) Ònye nwere ike iji Ipamorelin?
Ipamorelin bụ ọgwụ na-akpali mmepụta nke Na-eto eto hormone n'ime ahụ gị. Ya mere, ọ nwere ike iji onye ọ bụla na-enwe ogo dị elu nke mmepụta nke homone. Ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa ọgwụ ahụ enyere ha aka ime ka ogo HGH dị elu n'ahụ ha ma nweta ihe mgbaru ọsọ ha. Na nchịkọta, ndị mmadụ dị iche iche na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ihe dị iche.
Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ahụ maka ozu na-eji ya eme ka ọ dị ngwa iji gbanwee ngwa ngwa na mgbake anụ ahụ mgbe nrụgide dị arọ na-enyere ha aka iru uru ahụ. Ndị ọzọ na-eji ya dị ka ihe na-eme agadi ma ụfọdụ ndị ọkacha mmasị na-ahọrọ iji ya n'oge usoro ntutu ha. N'ilee uru nke ọgwụ ahụ dị n'elu, ị ga-achọpụta na ọgwụ ahụ bụkwa ọgwụ dị mkpa na ngalaba ahụ ike dịka ọ na-enyere ndị ọrịa aka na-ata ahụhụ site na ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, na oke ibu iji kpọtụrụ ụfọdụ.
(2) Ipamorelin usoro onunu ogwu
Usoro akwadoro maka ị drugụ ọgwụ a kwa ụbọchị sitere na 200-300 mcg nke ekwesịrị iwere ya na oge 2-3 kwa ụbọchị. Usersfọdụ ndị ọrụ na-ahọrọ iji ọgwụ ahụ ihe mgbakwunye Horne Hormone Releasing Supplement maka nsonaazụ ka mma. Oge ojiji nke kacha nta kwesịrị ịbụ izu 8, mana ị nwere ike ịgbatị ya na izu 12 ọ bụrụ na ịnweghị mmetụta ọ bụla. Agbanyeghị, gwa dọkịta gị maka mmepe ma ọ bụ mmetụta ọ bụla ị na-enwe mgbe ị .ụsịrị ọgwụ ahụ. Sarm RAD140 (Testolone) Onye ọrụ gwara ya: Nyocha, Jiri usoro, Ihe ize ndụ
Ọdịdị ahụ mmadụ anaghị adị n'otu; ụfọdụ ndị nwere ike Jiri Ipamorelin ma nweta nsonaazụ kachasị mma mgbe ndị ọzọ na-ezighị ezi. Anyị na-agba ndị ahịa anyị ume mgbe niile ka ha gaa hụ ọgwụ tupu ha aṅụ ọgwụ. Dọkịta gị kwesịrị ịkwado ezigbo usoro ọgwụgwọ dịka mkpa gị na ọnọdụ ahụike gị.
(3) Ngwakọta usoro ọgwụgwọ akụrụngwa
Maka ndị ọrụ ọhụrụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmalite site na ịnweta otu ngwugwu kwa ụbọchị ma hụ na ị na-ewere ya n'otu oge ahụ kwa ụbọchị. A na-agba ndị na-amalite ịmalite ịmalite site n'iji ihe dị ka izu asatọ malite, ma dọkịta gị nwere ike ịgbatị ya na 12 izu. Mgbe ị gachara ọgwụ, dọkịta ahụ ga-ekpebi usoro kachasị mma maka gị na mgbakọ kwesịrị ekwesị.
Dọkịta gị nwere ike ịmalite ụbụrụ mgbe ị jiri ya maka oge ma ọ bụ mgbe ọnụọgụ mbụ. Otú ọ dị, nke a abụghị nkwa na ị ga-enweta nsonaazụ ịchọrọ, mana ọ ga - enyere gị aka inweta ezigbo mma n'ime ọgwụ ahụ. Na njedebe nke Ọdịdị nke Ipamorolin ị ga - enwerịrị ike nweta nsonaazụ ndị a;
Na-eto eto ma na-ebelata ogo
Nwee ọganihu n'ime ike nke ike gị nke bụ ihe ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-achọ mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe.
Ọganihu nke homonụ mmadụ na-eto eto kwesịrị ịdị na-amụbawanye dị ka ọgwụ na-akpali ahụ gị iji mepụta HGH. Ị ga-enwekwa uru ndị ọzọ dịka nke ụba homonụ mmadụ na-eto eto, ịmepụta akpụkpọ ahụ mara mma, na nhụpụ nke wrinkles ma ọ bụ scars na akpụkpọ gị.
N'agbanyeghị nsonaazụ ịchọrọ iji nweta site na njedebe nke okirikiri ma ọ bụ uru ahụ ike, ụkọ ọnwụ, ike ahụ ike ma ọ bụ naanị iji meziwanye ogo homonụ na ahụ gị, agbalịrị ịbawanye ma ọ bụ belata usoro ọgwụgwọ n'etiti nke okirikiri. Ọ dị mma ịkwado otu usoro onunu ogwu ahụ ruo mgbe ị gwụchara. Asing bawanye usoro onunu ogwu nwere ike ibute nsonaazụ na-adịghị mma ma ị na-atụ anya nsonaazụ Ipamorelin dị mma ebe a.
Ọ bụrụ na ị họrọ ịṅụ ọgwụ a, ị ghaghị ijide n'aka na ọ na-emegharị ya na usoro ahụ gị n'ụzọ dị iche iche mgbe niile. Gbanwee dosages site n'oge ruo n'oge, ma ọ bụ na-agbanwe usoro ọgwụgwọ mgbe ị ga - enweghi ike ime ihe mgbaru ọsọ gị. Ka ị nweta oke nsonaazụ Ipamorelin, ọ dị mkpa ka ị hụ na usoro nrụzi na-anọgide na-adịgide adịgide n'ogologo oge niile nakwa na ị na-eji usoro ọgwụgwọ eme ihe n'otu oge kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe dị mkpa, dịgasị iche iche na ọ ga-emetụta ọkwa mgbakwunye na usoro ahụ gị. Nke a ga-egosipụtakwa gị mmetụta dị oke nta.
Ọzọkwa, ị injectionụ ọgwụ gị mgbe ị dị obere oge tupu ị rie nri bụ ụzọ ọzọ dị mkpa iji hụ na ọ na-aga nke ọma n'ọbara gị. Tupu ịmalite ịmalite usoro ọgwụgwọ gị, egbula oge ịjụ dọkịta gị ajụjụ ọ bụla gbasara ọgwụ ahụ. Welite nchegbu gị tupu ma ọ bụ n'oge usoro Ipamorelin ga-enyekwa aka n'ịbawanye nsonaazụ.
(4) Uzo ozo nke Ipamorelin
Ugbu a, ọ dịghị usoro sayensị ọ bụla edepụtara n'ụzọ ziri ezi iji jiri ọgwụ a eme ihe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ejiri 500-1000mcg kwa ụbọchị kwa ụbọchị, oge ga-adị mkpụmkpụ ma gaeje maka usoro mgbanaka 8. N'aka nke ọzọ, ndị na-eme egwuregwu na-enye ọzụzụ maka asọmpi na-abịa n'ihu nwere ike iji 3-300mcg mee ihe iji nweta 500 izu. Ndị ọrụ ọhụrụ a na-agba ume ka ha gaa maka ụbụrụ dị ala, chọta 12 mcg dosages dị elu maka ha na mgbe ụfọdụ, ndị dọkịta na-ebelata ya na 300 mcg maka izu 200 maka usoro ahụ ha iji jiri ọgwụ ahụ mee ihe.
Ndị ọrụ Ipamorelin siri ike na-aga na-aga maka akwa dosages n'enweghị nsogbu ọ bụla. Otú ọ dị, akwa dosages maka ndị na-amalite amalite dị nnọọ ize ndụ. Dabere na ume nke onye, ​​ụfọdụ ndị na-amalite nwere ike ịchọ uzo dị elu karịa ndị ọrụ ibe ha ka ha nweta Results results nke Ipamorelin ha na-achọ. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị ọrụ ọhụrụ ga-enweta mmetụta dị iche iche ọbụlagodi mgbe ị gachara maka usoro ọgwụgwọ kachasị elu. Ọ bụrụ na ị nweta nke a, kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo ka ịchọta ngwọta nke nwere ike ịbụ ma ọ bụ ibelata usoro ọgwụgwọ ahụ ma ọ bụ ịkwụsị nsụgharị Ipamorelin.
Dịka e kwuru n'elu, ọ nweghị usoro ojiji Ipamorelin a ga-asị na ọ bụ ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ. Enwere ọtụtụ ụzọ ụzọ ojiji ị nwere ike isi soro ma ka na-enweta uru ọgwụ ahụ. Bụ onye ga-ekpebi mgbe ị ga-etinye ọgwụ ahụ na mgbatị gị ma ọ bụ nri gị. N'agbanyeghị etu Ipamorelin onunu ogwu ma ọ bụ okirikiri si dị elu, ebumnuche kasịnụ iji mezuo ebumnuche gị.
Maka ndị ọrụ ọhụrụ, ọ na-adị mma mgbe niile ịmalite site n'usoro dosages na obere oge nke nwere ike ịba ụba n'ọdịnihu. Usoro ahụ na-enyere ahụ gị aka ịgbanwe ma gbanwee Ipamorelin n'ụzọ dị mma tupu ejiri nwayọ mụbaa. Jide ntuziaka dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị mgbe ị gwụchara.
5.Ipamorelin Ntuziaka onye ọrụ: Adịghị m ka onye na-esote
N'ileghachi anya na nyocha Ipamorelin dị iche iche na nyiwe dị iche iche, o doro anya na imirikiti ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ na nsonaazụ ha nwetara mgbe ha gwụchara usoro onunu ogwu. Ndị ahịa na-enye nzaghachi dị iche iche nke a na-ahụkarị na ngwaahịa niile. Fọdụ ndị ọrụ ga-ekwupụta nsonaazụ Ipamorelin oge niile ebe ndị ọzọ ga-egosipụta enweghị afọ ojuju ha. Ipamorelin bụ ihe na-akpali akpali nke na-eto eto kama ọ na-enyekwara ndị ọrụ aka iru ihe mgbaru ọsọ dị iche iche na ndụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ ahụ eme ihe iji nyere ha aka imeziwanye ahụ ike ha ma nweta ahụ ike.
Iji meziwanye arụmọrụ na asọmpi ahụ, ndị na-eme egwuregwu ga-achọ ume zuru oke nke Ipamorelin na-enye - yabụ mee ka ọgwụ a bụrụ onye ama ama na ụwa egwuregwu. Otú ọ dị, ndị na-eme egwuregwu na-eso ọgwụ ahụ eri nri kwesịrị ekwesị na mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị na-enweta uru Ipamorelin ruo na nke kachasị. A nwekwara ike iji ọgwụ ahụ na mgbakwunye ndị ọzọ maka mmezu nke nsonaazụ kachasị.
Imirikiti ndị ọrụ enyela Ipamorelin ezigbo ọkwa ma nyekwa nzaghachi dị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwu na ọgwụ ahụ nyeere ha aka iru ihe mgbaru ọsọ ha na ụwa egwuregwu. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ ọgwụ a na-eto eto ahụ ike. Ekwuola ụfọdụ bodybuilders na-ekwu na ha na-eji Ipamorelin maka abụba ọnwụ na ọ dị ịtụnanya ruo ugbu a. Mkpụrụ hormone nke na-eto eto na-ahụ maka uto nke akụkụ ahụ dị iche iche, ndị na-eji ọgwụ a eme ihe ji n'aka na uto ahụ na akwara nke mkpụrụ ndụ. Enwere ndị ọrụ ahụ họọrọ ngwaahịa a dịka mgbakwunye mgbakwunye na ịka nká, ma ọ nyela nsonaazụ dị mma.
N'ọgwụ ahụ, ọgwụ dị mkpa iji nyere ndị ọrịa aka na-arịa ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, na ọrịa ndị ọzọ na-arịwanye elu nke hormone. Nyocha sayensị, egosila na ezughị oke homonụ mmadụ na ahụ na-eduga n'ọtụtụ nsogbu na ọrịa ndị dị ka ọrịa shuga. Site na reviews nke Ipamorelin, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na ọgwụ ahụ emeela ka ahụike ha dị mma.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ na Ipamorelin nyeere aka n'ịdị mma nke mmepụta insulin n'ahụ ma mee ka ahụike ha dịkwuo mma mgbe ha na-arịa ọrịa shuga ruo ogologo oge. Enwere ike ịkụzi mkpụrụ ndụ na ntanghachi anụ ahụ na-enye Ipamorelin ọtụtụ ndị ọrụ karịa ka ndị na-eji ya dị ka ngwaahịa na-eme agadi. Mgbe ọnwa ole na ole n'iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ụfọdụ ndị ahịa na-ekwu na mmụm na ọnyá na akpụkpọ ahụ malitere ịla n'iyi.
N'otu aka ahụ, ụfọdụ ndị ọrụ Ipamorelin enwebeghị oge dị mfe ma na-eme mkpesa na-enwe mmetụta dị egwu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji Ipamorelin n'ọtụtụ dị elu ma ọ bụ na-agaghị aga nyocha ahụike, mgbe ahụ mmetụta ndị dị na ya nwere ike ịdị njọ. Naanị n'ihi na ọgwụ arụụrụ enyi gị aka, ọ bụghị akpaka na ọ ga-ebute nsonaazụ Ipamorelin ga-abara gị uru.
Ahụ mmadụ dị iche iche, nke a pụkwara ịbụ ihe mere ụfọdụ ndị ọrụ ji eme mkpesa banyere nsogbu ndị siri ike. Ibanye dọkịta gị n'ime usoro ahụ, na ikwe ka ọ hapụ ya ka o dozie usoro ọgwụgwọ ziri ezi maka gị bụ naanị ụzọ ị ga-esi zere inwe mmetụta ndị dị na ya. Otú ọ dị, enwere mmetụta dị nta dịka isi ọwụwa, na ihe mgbu n'akụkụ ebe ogwu ahụ mana enwere ike ịchịkwa ya ma ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị n'oge.
6. Mmetụta dị mma nke Ipamorelin
Ipamorelin dị ka ọgwụ ndị ọzọ mgbe ejighị ya nke ọma nwere ike ịkpata nsonaazụ dị iche iche. Otú ọ dị, iji belata mmetụta ndị a, ka dọkịta gị dezie usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị na okirikiri. Fọdụ ndị na-emehie site na ịzụta ọgwụ sitere na ntanetị dị iche iche na ntanetị wee malite iji ya. Dị ka e kwuru na mbụ, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ebumnuche nyocha ahụike yana ya mere, ọ nwere ike isiri gị ike ịtọ onwe gị usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. Ihe dị mma na ọgwụ a bụ na mmetụta ndị dị na ya nwere ntakịrị ọfụma ma e jiri ya tụnyere ọgwụ ndị ọzọ na-akpali akpali. Otú ọ dị, lee ụfọdụ mmetụta ndị nkịtị na-emetụta ọgwụ a;
Ipamorelin enweghi mmetụta nke estrogenic. Iji nke Ipamorelin emeghị gynecomastia. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ nwere ike ime obere nkwụsị mmiri n'oge mbido gị na ebe ndị kachasị ike gụnyere mkpịsị aka na nkwonkwo ụkwụ. Idebe mmiri nwere ike ịkwụsị mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ọ na-agwa dọkịta gị.
Ugbu a, ọ dịghị ihe akaebe ma ọ bụ ederede orrogenic mmetụta ndị kpatara ọgwụ a. Nke ahụ pụtara na ndị ọkachamara na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghi ntutu ntutu isi, ihe otutu ma ọ bụ ịmịnye nwa na ndị ọrụ ụmụ nwanyị. Nke a na - eme ka GHRP dị n'etiti ọgwụ ndị kasị dịrị nchebe na ụdị a.
Enweghi mmetụta utịp Ipamorelin dị na ọrịa obi, ma ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ọgwụ ọjọọ akọwo akụkọ ọma na ahụike obi ha mgbe ha gwụchara usoro ọgwụ. A na-eto ọgwụ maka inye ndị ọrịa nwere ọbara mgbali elu na ọrịa obi.
Nje ọgwụ a enweghi ihe ndekọ nke igbochi mmepụta ihe sitere na hormones testosterone na ahụ gị. Ipamorelin anaghị emetụta mmepụta hormones (LH) na-agụnye ọgwụ na-emepụta ihe na Flam. Tụkwasị na nke ahụ, ọgwụ ahụ enweghi mmetụta dị n 'ịmepụta Hormone na-atụgharị na Thyroid (TSH).
Ozi ọma ahụ bụ na Ipamorelin adịghị emerụ ahụ ma ọ bụ na-egbu egbu na imeju gị n'agbanyeghị oke ọgwụ ị na-ewe. Ka ọ dị elu ma ọ bụ dị oke ogwu, ọgwụ ahụ na-adịgide adịgide maka imeju gị. Otú ọ dị, enwere mmetụta ndị ọzọ na-emekarị dị ka onye ọrụ ị nwere ike ịnweta, ma ha nwere ike ịnagide. Ha gụnyere;
Isi ọwụwa nke ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na-eme mkpesa ma enwere ike idozi site na ịhazi ihe oriri gị.
Mgbu na ọnyá na mpaghara ịgbawa; Otú ọ dị, ntụgharị nke ebe ndị inye ahụ bụ ọgwụgwọ kasị mma maka nsogbu a.
Ìhè na-aga, a pụkwara idozi nsogbu a site n'ịgbanwe ihe oriri gị, ma ị nwere ike ịchọ enyemaka nke dọkịta gị ma ọ bụ onye ọkachamara.
Ihe prolactin na-abawanye na ahụ nke na-emekarị, ma ọ bụrụ na o mee, gbalịa ileba anya maka Cabergoline.
Akụkụ kasị mma nke ọgwụ a bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị na oge. Jide ụlọnga ọkachamara ahụike ka ị nọrọ n'akụkụ nchebe n'oge niile. YK-11 Cycle na Nleghachi Nlele site n'aka Ndị Ọrụ Nlekọta
7. Atụmatụ maka ịzụ Ipamorelin
Ahịa jupụtara na ahịa Ipamorelin maka ire ere, onye ọ bụla na-azọrọ na ọ ga-emepụta kacha mma Ipamorelin. Ya mere, ọ dị mkpa ịkpachara anya n'oge niile karịsịa mgbe ịzụrụ ọgwụ ọjọọ dịka ụba hormone boosters. Ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa na-ere Ipamorelin, mana ị ga-eme nchọpụta kwesịrị ekwesị iji ghọta otú ụlọ ọrụ si arụ ọrụ na àgwà ngwaahịa ha. I nwekwara ike zụta Ipamorelin site na ụlọ ahịa ọgwụ.
Ọnụ ego Ipamorelin dịkwa iche site n’otu ụlọ ọrụ gaa na nke ọzọ. Gaa maka ụlọ ọrụ amaara ama nwere ezigbo ndekọ na ịnye ngwaahịa dị mma. Chọọ nyocha dị iche iche Ipamorelin ma nyochaa ihe ndị ahịa na-ekwu gbasara ngwaahịa ụlọ ọrụ. N'aka nke ọzọ, dọkịta gị nwere ike inyere gị aka ịchọta ebe kachasị mma Ipamorelin na-arụpụta. Adabala maka onye obula Ipamorelin peptide maka ire ere ị na-ahụ gburugburu gị, cheta naanị mma ọgwụ ga-enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Agbanyeghi na mmefu ego bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-eme mkpebi ịzụrụ, ekwesighi ịkwụ ụgwọ Ipamorelin karịa etu esi ere ngwaahịa ị chọrọ ịzụta. Ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị dị ala na-adịkarị ọnụ ala karịa ndị ahịa. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na ị kwesịrị ịga ngwaahịa dị oke ọnụ. Họrọ ụlọ ọrụ na-enye ọgwụ dị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ọnụ ego Ipamorelin na-adabere n'otú ọgwụ ahụ dị, ọgwụ 2mg na-ere $ 15 na $ 25. Maka ozi ndị ọzọ egbula ịkpọtụrụ anyị, ndị ọrụ nkwado ndị ahịa anyị nwere ike ịzaghachi nchegbu na ajụjụ gị niile.
Anyị bụ ụlọ ọrụ kachasị mma ị nwere ike ịtụkwasị obi, anyị na-emekwa njem anyị mgbe niile n'enweghị nkwụsị. Oge ị na-eme usoro gị, ndị ọrụ nnyefe anyị na-amalite ibubata ya ngwa ngwa ma mee ndokwa maka otu esi enyefe ọgwụ ahụ n'ime obere oge o kwere omume. Ị nwere ike ịnweta ebe nrụọrụ weebụ anyị ngwa ngwa na smartphone gị, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba nkume ma mee ka iwu gị n'ime obere sekọnd. Ụzọ nkwụnye ụgwọ anyị dịkwa mma iji nweta ndị ahịa anyị niile.
Semenistaya, E., Zvereva, I., Krotov, G., & Rodchenkov, G. (2016). Mwepu siri ike nke na-ewepu obere peptides na-arụ ọrụ na cartridges na microelution 96 plates efere dị mma site na mmamịrị mmadụ. Ọgwụ nyocha na nyocha, 8(9), 940-949.
Ọrụ, HDT (2017). CJC-1295 Peptide Ahịa & Ọnụọgụ. Star.
Pinyot, A., Nikolovski, Z., Bosch, J., Segura, J., & Gutiérrez-Gallego, R. (2010). Na ojiji nke sel ma ọ bụ membranes maka ihe nnabata njikọ: uto hormone nzuzo. Nyocha biochemistry, 399(2), 174-181.